प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा को–को सहभागी हुँदैछन् ? यस्तो बन्दैछ टोली « Surya Khabar
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा को–को सहभागी हुँदैछन् ? यस्तो बन्दैछ टोली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्र प्रचण्डको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा ४२ सदस्य रहने भएका छन् । सरकारले ४२ जनाको खर्च बेहोर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । सरकारले प्रचलित विदेश भ्रमण निर्देशिका विपरीत भ्रमण टोली जम्बो बनाएको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको विदेश भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सरकारी खर्चमा अधिकतम २३ जना सहभागी गराउन सकिने उल्लेख रहेको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोली सानो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । भ्रमण दलमा रहने व्यापारिक समुदाय र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि र निजी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको खर्च भने सरकारले वेहोर्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री साथमा पत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशसरण महत, भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक, विभिन्न दलका सांसद विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारी, पत्रकार र व्यापारीलगायत रहने जानउँदै मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखिएको छ ।